Global Voices teny Malagasy » Mangataka fihaonambe iraisam-pirenena ny Karaiba ho an’ny fizaràna mitovy ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Febroary 2021 1:41 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fahasalamàna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, COVID-19
Dokotera manoratra “eo am-piandrasana ny vaksinin’ny COVID-19″; sary  avy amin’i Jernej Furman  ao amin’ny Flickr, CC BY 2.0 .
Na dia efa manao antso avo  amin’ireo firenen-dehibe tavaratra ary ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) mba tsy hihazona ireo vaksiny fanefitry ny COVID-19, izay mety hiteraka ny fiakaran’ny vidin’izany ho an’ireo firenena madinika, dia nangataka  ihany koa ny Fiarahamonina Karaiba (CARICOM) mba hanaovana fihaonambe iraisam-pirenena handinihana izay azo atao amin’ny fizaràna mitovy ny vaksiny.
Raha milaza izy fa “sahiran-tsaina amin'ny tsy fitovian’ny fahafahana mahazo ny vaksiny hiadiana amin’ny valanaretina, indrindra ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamàna sy ny vahoaka farofy,” dia nanamarika  ny fanambaràn’ny CARICOM fa ho sarotra ho an’ireo firenena madinika ny hifaninana amin’ny tsena iraisam-pirenena amin’ny fividianana ny vaksiny:
Raha jerena ny fihànaky ny valanaretina dia samy farofy ny firenen-drehetra ka tokony hiara-hiasa.
Noho izany ny Fiarahamonina Karaiba dia mangataka fihaonambe iraisam-pirenena, anatin’ny Filankevitra Fanamoràna “ACT-A” ataon’ny OMS mba handinihana ny fitovian’ny fahazoana sy fizaràna ny vaksinin’ny COVID-19.
Ny 10 Septambra 2020, napetraky ny OMS ny Filankevitra fanamoràna “ACT-Accelerator ”, natao hampitovy tantana ny famolavolàna, fanitarana ary fizaràna ny “vaksiny, fitsaboana sy fitiliana”.
Nanampy  izany fanambaràna izany fa tokony ho anisan’ny laharampahamehana ny faritra misy azy:
Ny fifandraisana tsy azo ihodivirana eo amin’ny lafiny toekarena sy sosialy, sy ny fivezivezena eo amin’ireo firenena mpifanila aminay sy ireo hafa maneran-tany no mahatonga ireo fanjakana mpikambana ao amin’ny CARICOM tsy maintsy mahazo vaksiny maika dia maika. Hisy tombontsoa ho an’ny andaniny sy ny ankilany izany, satria ho voafehy ny fiparitahan’ny valanaretina.
Nankasitrahan’ny any amin’ny faritra ny hevitry ny CARICOM, ary notohanan’ireo toniandahatsoratry ny haino amanjery izany antso izany. Ny Trinidad and Tobago Guardian ohatra, raha nitaraina ny momba ny tsy fisian’ny fifanampiana iraisam-pirenena mba hahazoan’ny rehetra ny vaksiny, dia nanoratra :
Raha jerena ny fiparitahan’ny COVID-19 sy ny fisehon’ny karazany mora miparitaka kokoa nandritra ny herinandro vitsy farany teo, dia be ny ahiahy ny mety haharetan’ity valanaretina ity mandritra ny taona maro izay vao ho tena voafehy.
Firenena maro no efa nahazo toerana mialoha anatin’ny lisitr’ireo mpanamboatra vaksiny, tamin’ny alalan’ny Fifanekena Fividanana Mialoha na “Advance Purchase Agreements” (APA). Izany fifanarahana izany, izay ahafahan’ny fanjakana mamandrika isanà vaksiny voafetra, dia mamatotra azy araka ny lalàna. Nisy ireo tatitra  nilaza fa ireo firenena tavaratra toy an'i Kanada dia nanafatra vaksiny avo-4 heny noho ny tena ilaina hiarovana ny mponina ao aminy.
“More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher-income countries.
Not 25 million; not 25 thousand; 25″-@DrTedros  #EB148  #COVID19  #ACTogether  https://t.co/6Rom7e5Nz7  pic.twitter.com/hVi6nCqiXD 
“Maherin’ny 39 tapitrisa ny isan’ireo vaksiny natao manerana ny firenen-dehibe 49 fara-fahakeliny.
Vaksiny 25 fotsiny kosa no nomena ny firenena madinika iray.
Tsy 25 tapitrisa, tsy 25 000, fa 25″
Etsy andaniny, tsy afaka nilaza ireo fanjakana Karaiba hoe oviana marina vao ho azo ny vaksiny, saingy manantena  ny Dr. Roshan Parasram, lehiben’ny mpitsabo ao Trinidad & Tobago fa any amin’ny faran’ny telo volana voalohany amin’ny taona 2021  izany.
Niresaka nivantana tamin’ireo mpanamboatra vaksiny ity firenena manana nosy roa ity, sy tamin’ny COVAX , iray amin’ireo sampana ao amin’ny OMS mpanafaingana ny fahazoana fitaovana hiadiana amin’ny COVID-19 na “Access to COVID-19 Tools (ACT)”. Ny COVAX dia mikendry ny hahazoan’izao tontolo izao ny vaksiny iadiana amin’ny COVID-19, na manana fahafahana hividy izany ireo firenena na tsia.
Etsy ankilany, ny Minisitry ny Fahasalamana ao Jamaika, Dr. Christopher Tufton, izay nanaiky  fa “zava-dehibe amin’ny fifehezana ny valanaretina ny famolavolàna sy ny fanaparitahana maneran-tany ny vaksiny azo antoka sy mahomby iadiana amin’ny COVID-19,” dia nilaza fa ny andiam-baksiny voalohany azo avy amin’ny COVAX, izay tokony ho amin’ny Aprily 2021, dia hiisa 292 000 – izay ampy hanaovana vaksiny mponina Jamaikàna miisa 146 000.
Nanao sonia  handray anjara amin’ny tetikasa COVAX ireo fanjakana rehetra mpikambana ao amin’ny CARICOM, izay hahafahan ’ny faritra hahazo vaksiny maherin’ny 1 tapitrisa. Na izany ary, ny COVAX dia tsy mampanantena afa-tsy izay isa mahampy ny fanaovana vaksiny ny 20 isan-jaton’ny mponina ao amin’ireo firenena rehetra, izay vao afaka mampitombo ny isa azony indray ireo firenena hafa.
Raha tsy misy anefa ny fampiatiana iraisam-pirenena, dia tsy ho afaka hanantena vaksiny ireo firenena tena mahantra izay sahirana amin’ny fiatrehana ireo akon’ny valanaretina amin’ny toekarena, raha tsy afaka taona iray.
Ny olana koa dia ny fahavononan’ny mponina ao Karaiba hatao vaksiny, indrindra taorian’ny famoahana tantara  toy ny fahafatesan’ny zokiolona norveziana marary miisa 23 taorian’ny nanaovana azy ireo ny vaksiny Pfizer COVID-19. Na eo ary ireny tranga ireny, dia milaza ny manampahaizana momba ny aretimifindra ao Trinidad, Dr. Avery Hinds  fa voaporofo fa tsy misy atahorana ho an’ny ankamaroan’ny mponina maneran-tany ny vaksiny.
I Trinidad & Tobago, any amin’ny tendrony atsimo amin’ny vondronosy Karaiba, dia nahitàna  trangan’aretina miisa 45 tamin’ny 17 Janoary 2021, ary 132 no nodimandry hatramin’ny nanombohan’ny valanaretina. I Jamaika, any amin’ny tendrony avaratra kosa, dia nahitàna  tranga miisa 14 274 tamin’io andro io, ary 326 no matin’ny COVID. Raha manakaiky ny 3 tapitrisa ny mponina ao Jamaika, izay efa ho avo roa heny ny an’i Trinidad & Tobago, dia nanao fitiliana miisa 152 685 izy, raha 77 515 kosa izany tany Trinidad & Tobago.
Ireo faritàny anglisy any Karaiba kosa dia efa nahazo ny vaksiny fanefitry ny COVID-19, ary nahazo ny vaksininy voalohany  ny praiminisitr'i Barbados, Mia Mottley. Tamin’ny fotoana nanaovana izany dia 5 monja no vaksiny nisy tao an-toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/19/151133/
 Jernej Furman: https://www.flickr.com/photos/91261194@N06/
 antso avo: https://www.sbs.com.au/news/the-world-health-organization-is-urging-rich-countries-to-stop-hogging-coronavirus-vaccines
 January 18, 2021: https://twitter.com/WHO/status/1351107170817990656?ref_src=twsrc%5Etfw
 any amin’ny faran’ny telo volana voalohany amin’ny taona 2021: https://www.cnc3.co.tt/cmo-vaccines-will-make-2021-a-much-better-year/
 Nanao sonia: https://today.caricom.org/2020/10/16/carpha-partners-with-paho-to-ensure-caribbean-states-equitable-access-to-covid-19-vaccine/
 Dr. Avery Hinds: https://www.linkedin.com/in/dr-avery-hinds/
 vaksininy voalohany: https://www.looptt.com/content/prime-minister-mia-mottley-takes-first-dose-covid-19-vaccine-5